10 Iindawo ezininzi ze-Epic Surf eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eIceland > 10 Iindawo ezininzi ze-Epic Surf eYurophu
Qeqesha ukuhamba iBritane, Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Train Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Qeqesha uhambo ePortugal, Uloliwe ohamba eScotland, Uloliwe eSpain, Train Travel The Netherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe, Ukuhamba eIceland
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 09/07/2021)
Iilwandle ezinesanti, iimbono zamawa, amanzi acocekileyo aluhlaza, kunye noluntu olumangalisayo lokusefa, ezi 1o zokufikela kwiindawo eziphambili eYurophu zigqibelele abagibeli kuwo onke amanqanaba. Ukusuka kunxweme lwase-Italiya ukuya kude eDenmark, nePortugal, here are the top beaches for surfing in all of Europe.
1. Unxweme lwaseGodrevy, England
Xa ixesha lilungile, ungakhwela ezinye iindonga zodonga olude kunye namalungelo apha. Ewe, Unxweme lwaseGodrevy ngeAtlantiki yenye yezona ndawo zintle kakhulu eYurophu. Ifumaneka eCornwell, enye ye ezona dolophu zithandekayo zonxweme eYurophu, Olu lwandle luyintandokazi yoluntu kulwandle.
Unxweme lwaseGodrevy luyinxalenye yeSt Ives Bay, kwaye ehlotyeni, uya kufumana apha uninzi lwabantu balapha ngeeholide zehlobo. Kakhulu ukugcakamela ilanga, ukwakha iinqaba elangeni, okanye uyayithanda indlu yokukhanya, engazi ukuba u-Godrevy unikezela ezinye zezona ndawo zibalaseleyo eYurophu.
Nini: spring, Epreli kumaza acocekileyo.
IAmsterdam ukuya eLondon ngoLoliwe
EParis ukuya eLondon ngoLoliwe
IBerlin iya eLondon ngoololiwe
IBrussels iya eLondon ngoLoliwe
2. Iindawo ezininzi ze-Epic Surf eYurophu: IPeniche iPortugal
Iyure ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iLisbon, indawo yesibini yokufika kwe-epic eYurophu ikulindile ePortugal. I-Peniche ngenene yisingasiqithi kunxweme lwasePortugal, edala iimeko ezintle zamaza aziwayo unyaka wonke. Ngaphezu, Iilwandle zasePortugal zezinye zazo olona lwandle luphuphuma eYurophu.
Ukuqhekeka kwenqaku elinomdla, Imithombo yesanti, Ukongeza kwiilwandle ezimangalisayo, Yenza iPeniche ibhabhe ezulwini. Ngelixa iPeniche sisingasiqithi, kukho ngaphezu 30 iindawo zokuntywila kunxweme lwayo, kunye neendawo ezininzi zokurenta izixhobo zokusefa. Inye kuphela into ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba ufuna i-wetsuit unyaka wonke, ngenxa yobushushu bamanzi abandayo.
Nini: Septemba ukuya kuOkthobha
Phi: UFoz do Arelho yinto elula ngokumangalisayo kwisanti emantla ePeniche yabaqalayo kunye neenzuzo, Enkosi ekufikeleleni kulungelelwaniso. Iflegi yolwandle eluhlaza okwesibhakabhaka iSupertubos kulapho uya kukhwela khona elona ziko lidumileyo eYurophu, isantya ngomsindo. ke, Ngaphandle kokuba ungumntu onamava, eli liza liza kukuthoba ngamandla.
Amaza: 80 cm ukuya 2.6 m.
3. IBundoran, Ayalend
Kwimimandla yonxweme ephefumlayo yehlabathi, ngeembono ezintle zengxondorha kunye neenxweme zokuhamba, Donegal County yenye yezona ndawo zintle eIreland. Idolophu yaseBundoran eIreland yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuntywila eYurophu ngotyando oluphambili.
Bundoran is home to the most famous waves, Incopho. Incopho yekhohlo elifanelekileyo, yomelele kwaye imfutshane. ke, emva kokukhwela iliza eligqibeleleyo ungabamba ipeyinti kwindawo yokupapasha yendawo, kunye nabasasazi bendawo.
Kuba: Surfers phambili.
Amaza: o.50 ukuya 2.7 m.
4. Iindawo ezininzi ze-Epic Surf eYurophu: UKlitmoller, Dominikha
Amaphenyane okuloba, abatyibilizi, kunye nentlabathi yolwandle enentlanganiso yokuLwandle okuMantla enyukayo sisimo oza kusibona eKlitmoller. Esi sakhelo kunye iimeko zemozulu yintoni eyafumana idolophu encinci yaseKlitmoller igama elithi "Cold Hawaii”.
Ukongeza kwi-surfing, IKlitmoller yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuphefumla umoya eMntla Yurophu. ke, ungatyibilika emanzini ukhwele amaza unyaka wonke. Enye into emangazayo malunga neKlitmoller kukusondela kwako Ipaki yelizwe kwaye yayo olondolozo lwembali, apho unokufumana ukukhuthazwa ngamabali eViking, ngaphambi kokubamba iliza eligqibeleleyo.
Ngoba: iimeko zemozulu ezigqibeleleyo, bonke abo batyibilikayo, unyaka wonke.
IHamburg ukuya eCopenhagen ngoLoliwe
I-Zurich iya eHamburg noLoliwe
IHamburg ukuya eBerlin ngoololiwe
IRotterdam iya eHamburg ngoololiwe
5. La Graviere Wave, Biarritz eFrance
Iilwandle zaseBiarritz zezinye zeelwandle ezinqabileyo eFrance, ndiyeke iYurophu. ngoko ke, Akumangalisi ukuba i-Biarritz yindawo edumileyo yokuntywila eYurophu. Umtshangatshangiso weLa Graviere utsala abantu abasuka kwihlabathi liphela ukuya kwiAtlantique Pyrenee kwimfuno emva kweliza eligqibeleleyo.
Ngelixa uHossegor etsala ikakhulu iindwendwe ngeholide ngaselwandle, uluntu lwase-surf apha yenye yezona zibalaseleyo eYurophu. ke, Unokufumana ulwazi kumaza ogqibeleleyo ngaphezulu kwekofu kunye nee-croissants ezivela kubaphehli bokuhamba eFrance. Ukwengeza, Imikhosi yaseHossegor ukhenketho lwehlabathi lweWSL minyaka le isiganeko.
Kuba: Surfers kuwo onke amanqanaba nakuzo zonke iintlobo zeebhodi.
Ngoba: Ukutyeba okunqabileyo kolwandle.
Nini: Ekwindla ukuya entwasahlobo, ukusukela phakathi ku-Okthobha idolophu iyacima, kunye namaza afikelela kwi-epic la Grave. ke, ungalucwangcisa uhambo lwakho lokuya kule ndawo ingummangaliso, kwaye uhlale kwiihotele okanye kwiikharavani eziqeshiweyo ngaselunxwemeni.
Ubungakanani bamaza: 0.5 ukuba 2.5 m.
6. Iindawo ezininzi ze-Epic Surf eYurophu: Isiqithi saseLewis, Scotland
Apho ukuvuvukala okuMantla kuhlangana khona neAtlantic, amaza alatyuzayo kunye nemimoya ebhudla ngamandla, yenza eyona ndawo ibalaseleyo yokuntywila eScotland. Isiqithi saseLewis esiqhagamsheleneyo kwiziqithi zeAtlantic Outer Hebridean sesinye sezona zibalulekileyo iindawo amahle eScotland.
ngoko ke, Isle of Lewis yiparadesi yokuntywila, kodwa kuphela ngabasasazi abaphambili kakhulu. Amaza aqatha ayenzelwanga abaqalayo abasasokola ukubhexa kwaye bangene kwiifts namalungelo.
7. Scheveningen The Hague, Inetherlands
Ukubetha umoya, ukubabela, okanye amalungelo okuloba, IHague yindawo entle yokundwendwela iiholide, nje a uhambo ngololiwe kude neAmsterdam. Nangona kunokubonakala ngathi imozulu ingwevu kwaye ayamkelekanga, kodwa ukuba Surfers, idala iimeko ezifanelekileyo zokukhwela iliza eligqibeleleyo.
Unokubamba ukudumba ekunene kulo lonke unxweme lweekhilomitha ezili-11, ngakumbi kunxweme lwaseScheveningen. Apha, uya kufumana ama-surfers kuwo onke amanqanaba kunye neevenkile ezilungileyo ze-surf kunye namaziko.
Ukushwankathela, IHague yaziwa ngendima yayo kwezopolitiko kwihlabathi, yenye yeendawo eziphambili ze-surf eYurophu.
IBrussels eya eAmsterdam ngoLoliwe
EBerlin ku Amsterdam With A Isitimela
EParis ukuya eAmsterdam ngoLoliwe
8. Iindawo ezininzi ze-Epic Surf eYurophu: San Sebastian, Speyin
Kumda ophakathi kweFrance neSpain, Kwilizwe laseBasque, ISan Sebastian sisixeko esoyikekayo ngaselwandle, kunye neendawo eziphambili ze-surfing. Apha, Uyakutsibeka ukusuka kumaza ukuya kwii-tapas bars, kwaye ke sizipholele elunxwemeni lolwandle kwenye yeedolophu ezintle zaseSpain.
ICantabria ineelwandle ezintle kunye neendawo zokusefa, njengolwandle lwaseZurriola, elwandle lolwandle lokugqibela eSan Sebastian. Kukulungele ukuqala kwabasaqalayo kunye nabadlali abaphakathi. kunjalo, kwiimbono ezintle, jonga amaza elwandle eLa Concha.
Ngoba: ukushiya ngokukhawuleza kwindawo evulekileyo.
Amaza: ukugoba okuhle-ujikeleze umntla-ntshona kudumba.
Nini: NgoNovemba ukuya kuDisemba.
9. I-Watergate Bay eNgilani, USennen Cove
I-Watergate Bay yindawo yokuntywila kwi-UK, kunye namakhulu amakhenkethi azimase itumente yelizwe lesiNgesi yokusefa elwandle aza kuvuma. Ukuqubuzelwa ngumoya kunye nokutshangatshangiswa ngamaza ithandwa kakhulu apha, Ukwenza iWatergate Bay yenye ye 10 uninzi lweendawo zokuntywila kumabonakude eYurophu.
ISennen Cove eCornwell lolunye ulwandle olunomtsalane kunye nendawo yokuntywila. I-Sennen Cove kunye ne-Praa Sands ziindawo ezintle zokuntywila ezinamabhishi amangalisayo.
Ngoba: Umoya kunye nokuvuleleka zilungile kubashenxisi kuwo onke amanqanaba.
10. Iindawo ezininzi ze-Epic Surf eYurophu: eSardinia, ElamaTaliyane
Isiqithi esihle sase-Italiya saseSardinia sivale 10 uninzi lweendawo eziphambili ze-surf kuluhlu lwaseYurophu, kunye noLwandle lweMeditera kunye nolwandle olunesanti. Apha, ungabamba amaza amancinci ukuya aphakathi, okanye amaza anamandla kwicala lasentshona. Ngaphezu, nge 300 iintsuku ezigqibeleleyo, ISardinia yiparadesi yokuntywila.
kunjalo, ukuba ufuna ukukhwela ukudumba okungummangaliso, emva koko cwangcisa iholide yakho yokusefa eSardinia, ukusuka kuNovemba ukuya kuJanuwari. ICosta Verde, IBuggero eSan Nicolo, kunye nePorto Ferro eAlghero 3 of the beautiful and best beaches for surfing.
Nini: NgoSeptemba ukuya kuNovemba, okanye ngoMatshi ukuya kuMeyi.
Amaza: 3-4 m.
EMilan ukuya eNaples ngoololiwe
UFlorence uye eNaples ngoololiwe
IVenice eNaples ngoololiwe
IPisa eNaples ngoLoliwe
at Gcina A Isitimela, Siya konwaba ukunceda ukucwangcisa iholide emangalisayo yokuntywila kwi 10 uninzi lweendawo zokuntywila kumabonakude eYurophu. Uhambo ngololiwe oluya kwindawo ekusa kuyo kunye nekhaya elinamaphupha kude nekhaya yeyona ndlela ikhawulezayo nefikelelekayo yokuhamba.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iindawo ezili-10 ze-Epic Surf zokufikela eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fmost-epic-surf-destinations-europe%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
bestsurfingplaceseurope I-surf surfcampseurope Surfing SurfingDestinations surfingholidayineurope wave
Uloliwe wokuhamba eBelgium, Travel Europe